Articles in Food and Drink
COVID-19 Updated 43
Daily Prices 35
Event & Entertainment 64
Mandalay Guide 52
Shopping & Entertainment 138
Things to do in Mandalay 173
What's New 1209
Mandalay Trend 135
by Aung Myo Hein on 26 February, 2021
Valentine Day ရဲ့ပြယုက်လည်းဖြစ်တယ် ဒါ့အပြင် မိန်းကလေး(၁၀)ယောက်မှာ (၉)ယောက်နီးပါးကြိုက်တဲ့ ချောကလက်ကို ဘယ်အချိန်တုန်းက စပြီးတီထွင်ခဲ့လည်းဆိုတာ သိလား?? Read full article
by Win MM Htay on 25 February, 2021
လူကြီးလူငယ်မရွေး ကြိုက်ကြတဲ့ ကူဖီးလ်မလိုင်လေးကို အိမ်မှာ အလွယ်တကူ လုပ်စားကြမယ်
အချိုဓာတ်က လူတိုင်းနဲ့ တည့်ပါတယ်။ ချိုချို၊ အေးအေးနဲ့ မွှေးမွှေးလေးဆိုရင် ပိုလို့တောင် အရသာတွေ့ပါတယ်။ ဒီလိုမျိုး ချိုအေးမွှေးတဲ့ အချိုတည်းစရာလေး တစ်ခုဖြစ်တဲ့ ကူဖီးလ်မလိုင် ပြုလုပ်နည်းလေးကို ဒီကနေ့မှာ ပြောပြပေးသွားချင်ပါတယ်။ Read full article
ဘာကြောင့် ဒိန်ချဉ်ကို မဖြစ်မနေ သောက်သုံးသင့်တာလဲ?
ဒိန်ချဉ်ဆိုတာက နွားနို့ကို ကစော်ဖောက်ထားတဲ့ အစားအစာတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ ဒိန်ချဉ်က အသုံးပြုမှု မှန်ကန်ရင် မထင်မှတ်ထားရလောက်အောင် အသုံးဝင်ပြီး အသုံးမပြုတတ်ပါက ဆိုးကျိုးအနည်းငယ်ရှိနေနိုင်ပါတယ်။ Read full article
by Win MM Htay on 24 February, 2021
ပူအိုက်တဲ့ နွေရာသီမှာ ချိုချိုအေးအေး ရေခဲချောင်းလေးတွေ လုပ်စားကြမယ်
နွေရာသီလည်း ရောက်တော့မယ်ဆိုတော့ အရသာလည်းရှိ၊ ကျန်းမာရေးနဲ့လည်း ညီညွှတ်တဲ့ အသီးစစ်စစ် ရေခဲချောင်းလေးတွေကို အိမ်မှာနေရင်း အလွယ်တကူ ပြုလုပ်နိုင်မယ့် နည်းလမ်းလေးတွေကို ပြောပြပေးချင်ပါတယ်။ Read full article
စားချင်စိတ် တဖွားဖွားပေါ်ပေါက်စေမယ့် ကမ္ဘာ့အထူးဆန်းဆုံး အစားအစာ (၁၀) မျိုး
အစားအစာဆိုတာက ဗိုက်ဆာနေတဲ့ချိန်မှာစားရင် ဘာစားစား စားဝင်တယ်ဆိုပေမယ့် အမြင်၊ အနံ့ နဲ့တင် စားချင်စိတ်ဖြစ်လာဖို့က ခက်ခဲပါတယ်။ မိန်းကလေးတွေက လွဲလို့ပေါ့။ သူတို့က ဘယ်ချိန်ဘယ်နေရာမှာမဆို စားဝင်အိပ်ပျော်တယ်လေ။ Read full article
by Win MM Htay on 20 February, 2021
ကိုယ်ဖွင့်ထားတဲ့ Barမှာ လူတိုင်း လာသောက်ချင်အောင် ဒီလိုနည်းတွေနဲ့ ဆွဲဆောင်ကြမယ်
ဒီဘက်ခေတ် (၂၁)ရာစုမှာ လူငယ်တော်တော်များများဟာ ဘားထိုင်တတ်တဲ့ အလေ့အကျင့်ကို ယဉ်ကျေးမှု တစ်ခုလိုမျိုး ကျင့်သုံးလာကြပါတယ်။ ကော့တေးတစ်ခွက်နဲ့ ရီဝေဝေအရသာကို ခံစားရင်း ဘော်ဒါတွေနဲ့ စကားစမြည် ပြောရတဲ့ ညနေခင်းကို လူငယ်အများစုက မက်မောကြပါတယ်။ Read full article
by Win MM Htay on 16 February, 2021
ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ ထိုင်ချင်စဖွယ် ကော်ဖီဆိုင်လေးဖြစ်ဖို့ ဘာတွေပြင်ဆင်ရမလဲ?
တောင်ပေါ်မြို့လေးတစ်မြို့မှာ ကော်ဖီဆိုင်လေးဖြစ်ဖြစ်၊ Bar လေးဖြစ်ဖြစ် အေးအေးချမ်းချမ်း ဖွင့်ရင်း ကိုယ်ချစ်ရသူတွေနဲ့ အတူတူသာ အိုမင်းသွားလိုက်ရရင် လောကကြီးဟာ ပျော်စရာအတိ ကြည်နူးပီတိတွေနဲ့ ဖုံးလွှမ်းနေလိုက်မယ့် ဖြစ်ခြင်းနော်။ Read full article
by Wai Yan Kyaw on 29 January, 2021
အစားအသောက်တွေကို Delivery Service တွေ၊ Takeaway တွေနဲ့ စားသောက်နေရတာ ပျင်းရိနေတဲ့ သူတွေ အိမ်မှာနေရင်း အိမ်ကမိသားစုကို လက်စွမ်းမပြချင်ဘူးလား? အိမ်တွင်းအောင်းရတဲ့ အချိန်တွေကို အစားအသောက်တွေ လုပ်စားရင်း အချိန်ကုန်ဆုံးလိုက်ပါ။ Read full article
အသားအရေကို အကျိုးပြုစေမယ့် Alcoholic Drinks (၄)မျိုး
အရက်ကို အလွန်အကျွံ သောက်မယ်ဆိုရင် ကျန်းမာရေးကို ထိခိုက်စေမှာ အမှန်ပါပဲ။ ဒါပေမယ့် အရက်ကို စည်းစနစ်ကျကျနဲ့ ချင့်ချိန်ပြီး သောက်နိုင်ရင်တော့ ခန္ဓာကိုယ်အတွက် အကျိုးကျေးဇူးများစေမှာပါ။ ဒါ့အပြင် တစ်ချို့သော အရက်... Read full article
by Aung Myo Hein on 19 January, 2021
နှစ်တွေကြာညောင်းလာပေမယ့် အရသာမပြောင်းလဲတဲ့ မန္တလာမြေက စန္ဒာမေ
စန္ဒာမေဆိုတာ ဖက်ထုပ်ကိုကောင်ကောင်းကြီး အရသာခံတတ်အောင် သင်ပေးခဲ့တဲ့ ဆိုင်လေးတစ်ဆိုင်ပေါ့။ငယ်ငယ်က ကျောင်းဆင်းပြီဆို ဖက်ထုပ်ကြော်စားချင်လို့ အမေ့ကို ပူဆာလိုက်ရတာ အမော။ ဂျင်းထည့်ထားတဲ့ ဆော့စ်လေးထဲကို ဖက်ထုပ်ကြော်လေးနှစ်ပြီး စားလိုက်ရရင် တစ်နေကုန်မောသမျှ Read full article
by Win MM Htay on 24 December, 2020
ခရစ္စမတ်နေ့ကို အသားကင် ပါတီလုပ်ရင်း အိမ်မှာပဲ Chill ကြမယ် …
မကြာခင် ခရစ္စမတ်နေ့တောင် ရောက်တော့မယ်နော်။ အရင်နှစ်တွေက ဒီအချိန်တွေဆို ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲတွေ အများကြီးနဲ့ အင်မတန် ပျော်ဖို့ကောင်းနေခဲ့တာပေါ့။ ဒီနှစ်မှာတော့ ကပ်ရောဂါကြီးကြောင့် ဘယ်မှမသွားရလို့ အကြပ်ရိုက်နေကြတဲ့သူတွေ ရှိမယ် ထင်ပါတယ်။ Read full article
by Win MM Htay on 23 December, 2020
ချင်းဂုတို့အသည်းစွဲ ကိုရီးယား BBQ က ဘယ်ကနေ ဖြစ်တည်လာတာလဲဆိုတာ သိကြလား?
မြန်မာပြည်မှာတင်မက နိုင်ငံတကာမှာ ကိုရီးယား အစားအစာတွေဟာ လူကြိုက်များ ရေပန်းစားလှပါတယ်။ လူသိများတဲ့ ကိုရီးယား အစားအစာတွေကတော့ တော့ပုကီ၊ ရေညှိထမင်းလိပ်၊ ကြက်အူချောင်း၊ ကင်မ်ချီ ထမင်းသုတ်၊ Read full article